Oasis Foundation weputara Oasis nde $3.5 — Accelerator nke Blockchain MetaMind | by Helen IMAH | Medium
Oasis Foundation nwere obi ụtọ ịkpọsa mmalite nke Oasis — MetaMind Blockchain Accelerator, yana ngụkọta nke $ 3.5 nde nke ego dịnụ iji kwado nzuzo na ngwa DeFi. A na-ahazi usoro mmemme a na MetaMind Labs, atụmatụ & mmekorita sitere na mkpokọta ntinye ego, ngwangwa & ndụmọdụ ndụmọdụ lekwasịrị anya na teknụzụ blockchain.
Mmemme Accelerator nke a ga-eji izu iri na abuo wee mee a ga-enye ndị otu ahọpụtara nkwado njedebe na njedebe, na-enye ndụmọdụ sitere n’aka ndị nkuzi profaịlụ dị elu, na nkuzi maka imepụta atụmatụ na igbu ọchụ gaa n’ahịa.
Ndị otu ahọpụtara ga-enweta onyinye nke $20K nke ọ bụla site na ọdọ mmiri ego $500K ROSE iji malite ọrụ ha. Na njedebe nke mmemme ahụ, nnukwu ụbọchị ngosi ga-eme ebe ndị otu ga-enwe ike ịchọta ego ọzọ site n’aka ndị na-achụ ego dị iche iche n’ụwa. N’elu nke ahụ, Oasis Foundation ga-etinye ego ruru $ 3 nde iji kwado ọrụ ahọpụtara na accelerator ahu.
Ekin Tuna, onye isi nke mmepe azụmaahịa na Oasis Foundation, kwuru, sị: “Anyị na-ewepụta otu n’ime ndị na-eme ngwa ngwa Blockchain Accelerators iji kwado mmalite mmalite nke na-abịa n’ihu na-achọ iwu DApps na Oasis n’ụzọ dị nchebe na nke na-agaghị ekwe omume na mbụ.”
Otu nwere ike itinye akwukwo ebe a iji sonyere Oasis — MetaMind Blockchain Accelerator ruo Jenụwarị 10, 2022, n’etiti abalị EST, mmemme a ga-ebido n’ihu ọha na February 2, 2022, o ga-adigide ruo ọnwa atọ.
Anyị ga na-eme usoro ihe ngosi ụzọ mba ụwa tupu mmalite mmalite nke nwere nnukwu ọdụ teknụzụ zuru ụwa ọnụ. Ihe omume ndị a (ma na saịtị ma mebere) na-elekwasị anya na isiokwu ndị akọwapụtara nke ga-eme ka ndị otu nwere mmasị mụtakwuo maka mmemme Oasis — MetaMind Blockchain Accelerator tupu itinye akwụkwọ.
London — Ịkpọba n’ime FinTech nke UK na ọkachamara Cyber
Singapore — Mmekọrịta na mahadum kachasị mma n’ụwa na agụmakwụkwọ
Dubai — Obodo niile ga-eme n’ọdịnihu, ihu ihu na ọdịnihu teknụzụ
USA — N’iji nnukwu ọnọdụ mmalite US
Anyị ga-enyekwu ozi gbasara mmemme ọ bụla yana otu esi aga ya ngwa ngwa site na webụsaịtị.
Alex Potter, sitere na MetaMind Labs; “Oasis ewepụtala teknụzụ dị egwu nke nwere ike dozie ụfọdụ isi scalability, nzuzo na nsogbu nchekwa anyị hụrụ na gburugburu ebe obibi. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana gburugburu ebe obibi nke gbara Oasis gburugburu, site na ndị ọchụnta ego ruo na agụmakwụkwọ, bụ n’ezie na-eduga ụwa. N’ihi ya, enwere m obi ụtọ ịhụ ka ọgbọ na-esote nke blockchain ndị ọchụnta ego nwere ike isi mee nke a iji were ngwa ha na mmalite ha gaa n’ọkwa ọzọ; elu nke na-enweghị ike iru na mbu!”
Banyere Oasis Protocol
Oasis bụ netwọk blockchain Layer-1 nke no n’isi decentralization ma na-akwado nzuzo. Ejikọtara ya na ntinye ya dị elu, ụgwọ gas dị ala na ihe owuwu echekwabara, Oasis Network na-enwe ike ịmegharị DeFi scalable, na-agbanwe Open Finance ma gbasaa ya karịa ndị ahịa na ndị na-azụ ahịa n’oge na ahịa ahịa.Oasis nwere ọtụtụ ndị na-akwado isi gụnyere Andreessen Horowitz, Accel, na Binance Labs, na ọtụtụ ọrụ na-ewulitelarị na netwọkụ ya & ndị mmekọ dị ka CryptoSafe Alliance na Binance, The BMW Group, Chainlink, Balancer, na ndị ọzọ.
Banyere MetaMind Labs
MetaMind Labs bụ atumatu na mmekorita sitere na mkpokọta nke itinye ego, ime ngwa ngwa na ndi ndụmọdụ lekwasịrị anya na teknụzụ blockchain. Site na ọnụnọ siri ike na Europe karịsịa, usoro ha nke ụlọ ọrụ ntinye ego, ndị mmekọ ụlọ ọrụ, ndị na-enye ọrụ, mahadum, na ụmụ akwụkwọ na-akwado mmalite mmalite kachasị ọhụrụ na oghere blockchain.
Dị ka oge niile, ị nwere ike ịga n’ihu na-ajụ anyi ajụjụ ọzọ i nwere n’ọwa anyi di iche iche
ma ọ bụ Telegram
Jisie ike nye ndị niile na-etinye akwukwo! 🤝
Disclaimer: Ebupụtara ọdịnaya a na weebụsaịtị blọgụ Oasis Protocol. Biko mee nyocha nke gị.
Quickswap use cases & Functionalities as an Automated Market Maker[AMM] DEX on Polygon